Mr Programmer (www.mr-programmer.com)
အသက်(၁၈ )နှစ်အရွယ် ကလေးထိန်းအား လေးနှစ်အရွယ်ကလေးငယ...
အသက်(၁၈ )နှစ်အရွယ် ကလေးထိန်းအား လေးနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်က သေနတ်ဖြင့်ပစ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ အိုဟိုင်းရိုးပြည်နယ် ဂျက်ခ်ဆွန်ဒေသတွင် လေးနှစ်အရွယ်ကလေး၏ ခြေထောက်ပေါ်ကို ကလေးထိန်းဖြစ်သူက မတော်တဆ တက်နင်းမိသဖြင့် အဆိုပါကလေးက သူ့အထိန်းအား သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်သည်ဟု ဒေသဆိုင်ရာသတင်းစာက ဇန်န၀ါရီ ၆ ရက်တွင်ဖော်ပြသည်။ အဆိုပါဒေသတွင် နာသင်ဘီဗာ အပါအ၀င် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် များသည် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် တစ်နေရာ မှတစ်နေရာသို့ ရွေ့လျား သွားလာ နိုင်သည့် နောက်တွဲယာဉ်ပါသည့် ရွေ့လျားအိမ်များ၌ ကလေးထိန်း သည့်အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်လေ့ရှိကြ
အသက်(၁၈)နှစ်အရွယ်ရှိ ကလေးထိန်း နာသင်ဘီဗာသည် ကလေးငယ်အား မတော်တဆ ခြေထောက် ဖြင့် တက်နင်းမိသဖြင့် ယခုကဲ့သို့သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခံရခြင်းဖြစ်သည်ဟုရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောကြားသည်။ မျက်မြင် သက်သေများ၏ အဆိုအရ ကလေးငယ်သည် အိပ်ခန်းဘီဒိုထဲမှ သေနတ်ကိုသွားယူ၍ ဘီဗာကို ပစ်ခတ်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟုသိရသည်။ ယင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဘီဗာ၏လက်နှင့်နံစောင်းကို သေနတ်ထိမှန်ခဲ့ပြီး ဆေးရုံတွင် တက်ရောက်ကုသမှုခံယူနေရကာ ဒဏ်ရာအခြေအနေမှာစိုးရိမ်ဖွယ်မရှိဟု ဆိုသည်။ အခြားဆယ်ကျော်သက် များတွင်လည်း သေနတ်ကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိမှုများ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်ဟုရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောကြားသည်။
Posted by Mr. Programmer at 1/11/2009 11:27:00 AM7comments
အ၀လွန်ခြင်းနှင့် ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ ဆက်စပ်။
အ၀လွန်ခြင်းသည် ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့် ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်သည့် (ဦးယဉ်းနာ) ဝေဒနာများကို ဖြစ်ပွားစေကြောင်း အမေရိကန်သုတေသန ပညာရှင်များက ထုတ်ဖော်ပြောကြား လိုက်သည်။ အ၀လွန်ခြင်းနှင့် ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ ဆက်စပ်လေ့လာ သုတေသနပြုချက် အသစ်တစ်ရပ်အရ အ၀လွန်ခြင်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် အတွင်း သွေးစီးဆင်းမှု နှေးကွေးစေပြီး ဦးနှောက်အာရုံကြောများကို ထိခိုက်စေကြောင်း၊ ထို့အပြင် ဦးနှောက်ဆဲလ်များ ပျက်စီးမှုပိုမို များပြားစေကြောင်း ၄င်းတို့က ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
အခွင့်အလမ်း အ၀လွန်သူများ သို့မဟုတ် ကိုယ်အလေးချိန် သာမန်ထက်ပိုများ နေသူများသည် ပုံမှန်ကိုယ်အလေးချိန် ရှိသူများထက် ခေါင်းကိုက်ခြင်း ဝေဒနာခံစားရမှု နှစ်ဆနီးပါးမျှ အခွင့်အလမ်းရှိကြောင်း ၄င်းတို့၏သုတေသနပြုချက်၌ ဖော်ပြထားသည်။
သို့ရာတွင် အ၀လွန်သူများအနေဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချခြင်းဖြင့် ဦးခေါင်း ကိုက်ခြင်းဝေဒနာ သက်သာမှုမှာ အနည်းငယ်သာ လျော့ပါးနိုင်ကြောင်း၊ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းမှာ အ၀မလွန်အောင် ထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။
Posted by Mr. Programmer at 12/15/2008 01:07:00 PM 1 comments
သင်၏အိပ်မက်များ၊ အတွေးများကို ကွန်ပြူတာဖြင့် ပုံဖော်နိုင်တော့မည်။
ဂျပန်မှ Computational Neuroscience Laboratories research အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှ သူတို့ဤနည်းပညာကိုရှာတွေ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သောကြာနေ့ ကကြေငြာလိုက်သည်။ သူတို့တွေဟာ ဦးဏှောက်မှ ပုံရိပ်များကို စတင်နားလည်လာပြီး ပြန်လည်ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီး ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသည်။
ယခုလောလောဆယ်. Researcher များသည် စမ်းသပ်သည့် အနေဖြင့် လူတစ်ချို့အား “neuron” ဆိုသည် စာလုံးများကိုကြည့်ခိုင်းပြီး ထိုစာလုံးများ ကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။
Posted by Mr. Programmer at 12/13/2008 09:56:00 AM6comments
iPhone more popular than Mas Selamat
Somewhat remarkably, Singapore's Google users looked up '3g iphone' more than they did 'mas selamat' this year. On Google's list of search trends for 2008, '3g iphone' was number5on the list of local searches in Google News. Escaped fugitive Mas Selamat only managed 9th position, ahead of paddler Feng Tianwei, though to be fair, 'singapore terrorist' was number3on that list. The top search term on Google News from Singapore was 'singapore olympics'.
In other fascinating but non-iPhone related discoveries, Maxwell hawker centre was the top hawker centre looked up, beating Newton, while chicken rice grabbed pole position on the local food list, ahead of 'punggol crab noodle'.
The most popular search term from Singapore was 'lyrics' (why??) while Hong Kong actor 'Edison Chen' was the fastest rising search term after his sex photos hit the web. (Update: the iPhone was number4on the fastest rising list).
Click here for Google's full list.
Source: The Singapore Iphone
Posted by Mr. Programmer at 12/11/2008 05:05:00 PM0comments
နိုင်ငံ့တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်…၊ ပြည်ပတွင်ရောက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသော မြန်မာများ ရောက်ရှိနိုင်ငံ၌ အစဉ်မပြေ၍ ပြန်လာလျှင် လယ်စိုက်၊ ငါးမွေး၊ ရော်ဘာစိ
Posted by Mr. Programmer at 12/05/2008 10:07:00 AM2comments